कोरोना कहरमा फर्क्यो ‘गोकुलको बोली’ – Health Post Nepal
२०७६ चैत ३० गते २१:२६
‘मालिक आदेश गर्छ,अन्डा खाजा ल्याउ। उसिनेको अन्डासाथ कामदार आँउछ, अम्लेट बनाउन सकिनस्- मालिक भन्छ। अम्लेटसाथ मजदुर आँउछ। मालिक भन्छ- उसिन्न सकिनस्। दुवैसाथ कामदार आँउछ।आगो हुँदै मालिक भन्छ- उसिन्नुपर्नेलाई अम्लेट र अम्लेट बनाउनुपर्ने अन्डालाई उसिनेछस् (सरकारलाई हेर्ने केही आँखाहरू) कोरोना!!!
माथिको भनाइ पूर्वसूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् आज आइतबार दिउँसो सार्वजनिक गरेका हुन्।
बाँस्कोटा सरकारमा रहँदा औधी चर्चामा आउँथे।
उनीमाथि लागेको आरोपले होस् वा बोल्ने शैलीले, सरकार बाहिर रहँदा पनि बेलाबेला उनको चर्चा भइरहन्छ।
मन्त्री भएपछि केपी ओलीलाई ‘सपनाको राजकुमार मान्छु’ भनेर अन्तर्वार्ता दिँदा उनी चर्चामा आउन थालेका थिए।
ओली सरकारको तीव्र आलोचना हुँदा बाँस्कोटा बचाउन भएभरका शव्द खर्चेर चर्चित भए। ओली सरकारको ‘कवच मन्त्री’ भनेर चिनिए।
शनिबार दिउँसो उनले केही समयको फरकमा दुईवटा ट्विट गरे। उनको ट्विटले कोरोना संक्रमण र लकडाउनले घरभित्रै सीमित भएको जनमानसको कान तीखा र रातो पारिदिएको छ।
जे भए पनि लकडाउनमा बस्दा गरेको ट्विटले बाँस्कोटालाई अहिले चर्चामा ल्याएको छ।
पहिलो ट्विट यस्तो छ-
‘एकजनाले मात्र प्रश्न खडा गर्नासाथ राज्य संयन्त्रहरूलाई छानबिन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर राजीनामा दिएँ। सिंहदरबार जल्नासाथ कीर्तिनिधि विष्ट र रंगशालामा दुर्घटना हुनासाथ केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएबाहेक कसले मैले जसरी राजीनामा दिएका छन्? अझ म अनैतिक र भ्रष्ट? बात गर्छन्!’
अर्थात्, बाँस्कोटा आफूलाई कीर्तिनिधि र केशरबहादुरसँग तुलना गर्छन्। विष्टहरूपछिको पुरानो पुस्ता र अहिलेको समकालीन राजनीतिमा आफूजति ‘नैतिक’अरूलाई देख्दैनन्।
ट्विटमा केही समर्थकले बाँस्कोटालाई उचालेका छन्। धेरैको स्तरीय प्रतिक्रिया छैन। उच्च बौद्धिक तह टिप्पणी गर्न रूचाउँदैन।
सुनिता दाहालको एउटा प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश हेरौं।
‘रंगशाला दुर्घटना भयो, प्राकृतिक प्रकोपले, सिंहदरबार जल्यो विपत्तिले। केशरबहादुर र कीर्तिनिधिले आफ्नो शासनकालमा भयो भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। तपाईंको त रेकर्ड प्रमाणित छ, अरूसँग तुलना नगरे हुन्छ।’
बाँस्कोटालाई पछिल्लो पुस्ताले भुल्दैन। उनी बोलेको अडियो रेकर्ड वर्षौंसम्म गुञ्जिरहने छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा बिचौलियासँग ७० करोडको घुस ‘बार्गेनिङ’अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए।
भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि नैतिकता त्यहीबेलै सकिन्छ, जतिबेला प्रकरण आयो।
अहिलेको राजनीतिक चरित्र बुझ्ने कसैले पनि बाँस्कोटाले स्वेच्छाले राजीनामा दिए भनेर पत्याउँदैन। बाँस्कोटालाई त यो प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिन अह्राएका हुन्।
घुस र कमिसन काण्डमा मुछिएर सरकारबाट हटाइएका बाँस्कोटा कति नैतिक-अनैतिक?
बाँस्कोटाकै जिल्लावासी राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लोकलाज भएको मान्छेले यस्तो भन्दै हिँड्दैनन्। अहिलेको राजनीतिमा यस्तो भन्ने मान्छे धेरै छन्। जे आरोप लागे पनि आफू ठिकठाक छु भन्ने गर्छन्।’
श्रेष्ठका अनुसार बाँस्कोटा प्रकरण छानबिन हुनुपर्ने मुद्दा हो। भोलि यो अदालतले टुंग्याउने विषय हो। छानबिनको घेरामा परेको व्यक्तिले यसरी जथाभावी बोल्दै हिँडेको राम्रो मानिँदैन।
दोस्रो, बाँस्कोटाले विष्टद्वयसँग तुलना किन गरे त्यो हास्यास्पद देखिन्छ। ‘सिंहदरबार जल्दा त्यसमा जिम्मेवार नभए पनि कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका हुन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजीनामा नदिने चाहिँ यिनी हुन्। सुरू-सुरूमा उनले डिफेन्ड गरिरहेका थिए। हुँदै हैन भनिरहेका थिए। पछि प्रधानमन्त्रीले भनेपछि राजीनामा दिएका हुन्।’
नैतिकता नभएको राजनीति र उत्तरदायित्व नभएको विज्ञान जति खतरनाक संसारमा केही नहुने श्रेष्ठ बताउँछन्। बाँस्कोटाका ट्विटले राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न झनै उब्जाइदिएको छ।
बाँस्कोटा यी तमाम् प्रश्नमाथि अहिले जवाफ दिन्छन्, उही पारामा, ‘ट्विटरमै भन्दिएपछि मैले थप केही भन्न परो र?’
आफैंले सार्वजनिक गरेको धारणाबारे जवाफ दिन नमान्ने बाँस्कोटा कति नैतिक?
सूचना मन्त्रीका रूपमा उनी ‘रूखो शव्द’बोलेर आलोचकलाई तह लाउन खोज्थे।
सुरू-सुरूमा उनी भन्थे- तपाईंले सोधेको प्रश्नै मिलेन।
उनले ठट्यौली गरेका हुन् कि साँच्चिकै भनेका हुन् भन्ने आममान्छे अलमलमा पर्थे। यस पंक्तिकारलाई नै कैयौंपटक बाँस्कोटाले ‘प्रश्न मिलेन’भन्ने जवाफ दिएर फोन राखेका छन्।
मिडिया, पत्रकार तथा आलोचकलक्षित उनले एकपटक ‘हेप्नी’ शव्द प्रयोगमा ल्याउँदा त्यसले उनी आफैंलाई ‘ब्याकफायर’गरेको थियो।
‘हेप्नी’ लाई नै थेगो बनाएर बाँस्कोटाप्रति आलोचक खनिए। व्यंग्य गर्दागर्दै बाँस्कोटा बहिर्गमन भएपछि ‘हेप्नी’को प्रयोग समाप्त नै भएको छ।
बाँस्कोटा दोस्रो ट्विट छ-
‘पदमा टाँसिएर छानबिनमा काँडेतार हालेर, लौ देखा पाइन, हेरौं भनेको भए पो मुखमा रूमाल कोचेर बस्नु। छानबिन चलेकै बेला कसैको मिथ्या आरोपमा मैले ल्याप्चे लाइदिनुपर्ने? घसिदिएको विष लाग्दैन, जिउ चिलाउने मात्र हो। लाग्न त पिउनुपर्छ प्रियजन हो।’
यो ट्विटमा उनले आफूलाई लागेको आरोप मिथ्या भएको कुरा उठाएका छन्। उनलाई यो घुसकाण्ड कसैले जबर्जस्ती ‘भिडाइदिएको’ हो भन्ने लाग्छ। र, त्यसले ‘जिउ चिलाएको’ मात्र।
कसैले भिडाइदिएको हो भने बाँस्कोटाले ती भिडाउनेहरूसँग मुकाबिला किन गर्न सकेनन्? पदबाट हटेपछि मात्र यो ओकले?
स्रोतहरूका अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा बाँस्कोटा तेस्रो व्यक्ति हुन्। बिचौलिया र राजनीतिक संयन्त्रले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न आफूनिकट व्यक्ति खोजेको देखिन्छ।
उच्च राजनीतिक संयन्त्रले सुरूमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमार्फत् ‘डिल’ गर्न खोजेको थियो। प्रसाईंलाई १८ अर्बको कुरो २२ अर्बमा मिलाउन भनिएको थियो। ‘मलाई झापामा मेडिकल कलेज चलाउनु छैन र अलिअलि भएको इज्जत पनि सक्नु?,’ भनी प्रसाईं हच्किए।
त्यसपछि यसको जिम्मा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पालाई दिइएको थियो। शेर्पाकहाँ पुग्दा २२ अर्बबाट बढेर २६ अर्ब पुगेको थियो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँग थाइल्यान्ड जाने अघिल्लो दिन शेर्पाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सेक्युरिटी प्रेसमा बाँस्कोटा छिरेका हुन्।
‘डिल’ गर्दागर्दैको अडियो बाहिरिएपछि ‘अरू सबै मन्त्री तौलिएबराबर, बाँस्कोटा एक’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले नै बाँस्कोटालाई राजीनामा गर्न लगाए।
दोस्रो ट्विटमा प्रतिक्रिया दिनेले बाँस्कोटालाई ७० करोड बार्गेनिङको प्रसंग बेजोड उठाएका छन्।
एकजनाले तीखो व्यंग्य गरेका छन्-
‘सपनाको लिलाम बिक्री भएपछि जुगल मासकोटा ट्विटरमा रोइकराइ। बोल्न सक्ने भए राष्ट्रिय मिडियामा आउन आग्रह, नभए किताब लेख, केही रचना गर।’
बाँस्कोटा यसबारे पनि आफू केही पनि बोल्दिनँ भन्छन्। ‘तपाईंले अनुमान लाउने, गर्ने कुरा हो। गरे भइगयो नि,’ बाँस्कोटा भन्छन्।
नैतिकताको प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने बाँस्कोटा एकमात्र भने हैनन्। ओलीको सरकारमा बाँस्कोटा अगाडि शेरबहादुर तामाङले बोलेकै कारण राजीनामा दिएका थिए। र, यस्ता धेरै मन्त्री छन्, बाँस्कोटाभन्दा अगाडि राजीनामा दिने। ती सबैले कीर्तिनिधि र केशरबहादुरसँग तुलना गर्न मिल्छ?